Hlola i-Acapulco, Mexico - World Tourism Portal
Hlola i-Acapulco, eMexico
Ongakubona e-Acapulco, eMexico. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili e-Acapulco, eMexico
Ongakwenza e-Acapulco, eMexico
Uhambo losuku kusuka e-Acapulco
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Acapulco, eMexico
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Acapulco, eMexico
Hlola i-Acapulco, tlowo muzi ongomunye wawo MexicoIzindawo zokudlela ezindala kakhulu zasolwandle, ezaqala ukuvelela kuma-1940s kuma-1960s njengendawo yokuthola izinkanyezi zaseHollywood kanye nezigidi zemigidi. I-Acapulco yindawo ethandwa izivakashi.
I-Acapulco ifaka isimo sezulu esishisayo, esimanzi nesomile. Izindawo ezifudumele ziseduze nolwandle lapho kukhona khona idolobha. Izivunguvungu zeTropiki nesivunguvungu ziyizisongo kusukela ngoMeyi kuya kuLwezi.
Amatekisi akuyo yonke indawo e-Acapulco. Njengoba zingafundile, qiniseka ukuthi uyavumelana ngethikithi ngaphambi kokungena. Baxoxisane ngaso sonke isikhathi - bangaphunga imali yabavakashi ebangeni elingamakhilomitha.
Yize amanani entengo engahlali ephansi, ukuqasha imoto kuyindlela enhle yokuhamba edolobheni. Ithrafikhi ayiyona leyo esindayo, ngaphandle kokuthi kuyi-Spring Break namaholide aseMexico, futhi ukupaka emahhotela akubizi kakhulu, nogesi ushibhile kakhulu.
I-La Quebrada Cliff Divers - Akukho ukuvakashela e-Acapulco kuqediwe ngaphandle kokubuka ama-cliff ahlukahlukene enza gxuma lawo elihlaba umxhwele emfuleni ongashisi wamanzi wamakheli ayingozi akha ingxenye engezansi kweLa Quebrada. Bebelokhu bekwenza kusukela 1934. Ungabona izimbotshana ezivela endaweni encane ngeflothi ngemali encane yokungena, noma udle endaweni yokudlela yaseLa Perla enikeza ukubuka okuhle kwabaphambukayo. Isikhathi sombukiso e-1PM, 7: 30PM, 8: 30PM kanye 9: 30PM.
IZócalo - IZócalo, isikwele sedolobha lase-Acapulco, sisehlangothini olusentshonalanga lweLa Costera. Kuyaphola, kunemithunzi futhi kunokuthula ngesikhathi sasemini. Kukhona imithombo emibili nezihlahla eziningi ezivuthiwe, ezigcwele iziqu eziningi ezingumbono ngokwazo. I-Zócalo ivame ukudalula amasiko endawo kunezinye, izindawo zabavakashi abaningi, izindawo. IZócalo iqukethe isonto lesonto le-Acapulco, kanye nezindawo zokudlela eziningi ezisayizi ngosayizi abavela eceleni komgwaqo kanye namakhishi amancane ekhoneni lomgwaqo. Izindawo eziningi zokudlela ezincane zizonikezela ngokudla okugcwele kwama-35 pesos amancane. I-Zócalo ebusuku kufanele ibonwe. Phakathi kwe-8: i-00 ne-11PM indawo igcwele izikhukhula zendawo. AmaClown ajabulisa isixuku ukuthola izeluleko. Umuntu ugqoke njengohlobo oluthile lwe-aztec iqhawe / into yesithombe. Uyisiliva kusukela ekhanda kuye ezinzwaneni.
I-Pie de la Cuesta - I-Pie de la Cuesta ingumugqa othule womhlaba cishe ongamakhilomitha angama-10 enyakatho-ntshonalanga ye-Acapulco, ohlangothini olungaphesheya koLwandlekazi iPacific nolungaphesheya kwechibi lamanzi ahlanzekile (i-Laguna de Coyuca) ngakolunye. I-lagoon inokuthula ngokweqile, kepha izivakashi ziyelulekwa ukuthi zingangeni kuLwandlekazi iPacific ePie de la Cuesta, ngoba i-surf iyingozi kakhulu. Umuntu angafika ePie de la Cuesta ngebhasi. Uma useBay Side ogudle iCosta, phakathi kwe-Escudero ne-Diego Mendoza, funa ibhasi elisho iPie de la Cuesta PLAYA LUCES. Lezi zikhuphuka lezo ziqaqa zomhlaba. Ungathatha futhi enye ethi San Isidro futhi ezokuvumela ukuthi uhambe kwi-Zocalo ePie de la Cuesta, kepha kufanele uhambe amabhlokhi ambalwa ukuya strip futhi cishe nekhilomitha nekhilomitha ukuya olwandle.
IPuerto Marquez - Itholakala echibini elincane nje elisempumalanga ye-Acapulco, iPuerto Marquez ibona ithrafikhi elincane kakhulu kunabavakashi kune-Acapulco. Olunye uhlangothi lwechibi selimbozwe ngokuphelele yizindawo zokudlela eziseceleni kwasolwandle ezinikeza ukudla okuthengwa ngamanani entengo ebhiya kanye nobhiya. Abanikazi bezindawo zokudlela (kanye nezinye izindawo eziningi) banomusa kakhulu kubavakashi futhi abanye bazonikeza izaphulelo noma umjikelezo wamahhala webhiya emaqenjini. Izivakashi nabantu bendawo ngokufanayo banamathela kuma-shrimp enchiladas, ama-sap negra modos, angena emanzini, futhi ajabulele ukukhanya kwelanga. Bambalwa abantu bendawo abakhuluma isiNgisi ePuerto Marquez kunase-Acapulco, ngakho-ke kunconyelwa ukuthi izivakashi zikhulume iSpanish esijwayelekile. Umuntu angafika ePuerto Marquez ngebhasi.
I-Isla de la Roqueta - I-Isla de la Roqueta inebhishi elihle nezindawo ezingajulile zemindeni okufanele zidlale ngazo. Ungafika lapho ngetekisi lamanzi noma ngesikejana sokuvakasha seglasi esisuka eCaleta Beach. Ukuvakasha ethekwini kunikeza amathuba amaningi okubona kanye nokubona izikebhe nemizi yabacebile nabadumile. Futhi, ungathola umbukiso we-cliff-divers 'eLa Quebrada, iNsikazi engaphansi komhlaba yase Guadalupe, futhi ubone ukuphambuka okuhambisana nokuvakasha kubhukuda ngaphansi kwesikebhe kunokudla ukuheha izinhlanzi. Uma ungapheki ukudla ngenkathi ukuvakasha kwakho, kunethuba elihle lokudla kwasemini ngendlela yokudlela esikebheni eza eceleni kwesikebhe futhi ilungisa i-oda lakho. Vele ulungele ukulinda ngokuya ngenani labantu abakulolu hambo kanye nawe. Kanye kwi-Isla de la Roquet kunemizila eminingi elondolozwe kahle, indawo enendawo yokukhanyisela futhi enezindawo ezinhle ze-snorkeling - kodwa ingaba rough (uma lokhu kungahambisani nawe, ukubheja kwakho okuhle kuzoba ukuya eCamino Real for snorkeling). Futhi ibhonasi, ungathatha isikhathi esiningi ngendlela oyifunayo njengoba izikebhe zenkampani yezokuvakasha zivimbela usuku lonke.
Amabhishi amaningi asendaweni eyi-bay ngaphambili kwe-Boulevard enkulu i- "La Costera". Le ndawo eyi-bay iyona edale ukuthi i-Acapulco idume futhi ubuhle bayo nobukhosi bayo bungakaze bube nokuphela ngokuhamba kweminyaka. Amanye amabhishi athandwa kakhulu ngaphakathi kweBay futhi aklelise iCratea yiL Hornos, “indawo yasolwandle” yakhona, iPapagayo, iTamarindos, ne-Icacos. ICaribesa ebhishi esekupheleni kwempumalanga ye-bay inobungane. Amabhishi eCaleta / Caletilla kanye neLangosta Beach asolwandle oluvulekile, futhi ngokuvamile kuhlanzeka kancane. Amahhotela amaningi e-Acapulco atholakala eduze kweCostera, futhi amanani entengo ngokuvamile ehla njengoba uqhubekela ngasentshonalanga ubheke eZócalo nase-Acapulco yakudala.
Olunye ugu lwamanzi avulekile, alungele ukusetshenziswa kwe-surf, luphambi kwe-Fairmont Acapulco Princess neFairmont Pierre Marqués Hotels. IPlaya Revolcadero isempumalanga ye-Acapulco, eduze kwesikhumulo sezindiza. Isenzo se-wave siphakeme kakhulu kunangaphakathi kwechibi noma eCaleta / Caletilla, esivikelwe iLa Roqueta Island. Ukuhamba usuka eLa Costera kuthatha imizuzu eyi-35 ngomgwaqo onamandla nowubukekayo.
Ungaphuthelwa uBarra Vieja, approx. I-20 idlule esikhumulweni sezindiza ibuya e-costera.
I-CICI - ipaki lamanzi khona lapho olwandle olukhulu. Kuhle kakhulu ezinganeni. Inamachibi amaningi ahlukahlukene kanye nama-slides, i-Skycoaster (ukuxubana phakathi kokujuluka nokugxuma kwe-bungee) ne-dolphinarium. Imibukiso yeDolphin ikhona, futhi kunjalo nangesikhathi sehora elilodwa ukubhukuda namahlengethwa - inkumbulo yempilo yonke.
Kukhona ezinye izinto eziningi ezikhangayo, kufaka phakathi igalofu, amakilabhu wasebusuku kanye nezinqaba zangemva kwe-post-herpanic. Ubusuku obusebusuku e-Acapulco bujabulisa kakhulu, futhi izindawo eziningi zilungele ezokuvakasha.
E-Bungee Jump, eLa Costera, amamitha angu-500 entshonalanga ye-La Diana circabout.
Eminyakeni embalwa edlule i-Acapulco isibe yindawo ethandiwe yibo abaphuka intwasahlobo, amashumi ezinkulungwane zabafundi behlela kuleli dolobhana elizosebenza ukuzosiza usizi lwasemini ngobuningi bemigoqo namakilabhu. Yazi ukuthi izindawo ezinabalandeli zingaba nemugqa omude ngaphandle futhi cishe ngeke zikuvumele uma ugqoka izikhindi kanye / noma amasudi.
ITaxco isendleleni esuka e-Acapulco iya eToluca, futhi umgwaqo omkhulu uya Mexico City. Amanye amabhuku eziqondisi akukhombisa njengedolobhana elincane elihle eligcwele izitolo zesiliva, kodwa abashayeli abaningi sebeyasaba imigwaqo ephithikile, emincane nenomoya. Ngokuqinisekile kumele kube yisikhathi sesikhathi.
I-Ixtapan de la Sal icishe ibe ihora iToyco esendleleni eya eToluca. Inesimo sezulu esihle namanzi afudumele. Kunamapaki amanzi anamuhla, ama-spas, kanye nezinsizakalo ezahlukahlukene zabantu bezempilo. Kungamahora we-4-5 kude ne-Acapulco.
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Acapulco.